AseVolgograd State University Medical - Study MBBS in Russian Federation
AseVolgograd State University Medical
isixeko : aseVolgograd
isifinyezo : VSMU
Zifumaneke : 1935
Musa ukulibala ukuba discuss Volgograd State Medical University
AseVolgograd State University Medical yenye owayedume kwaye ezaziwayo kakhulu Izikolo Higher kokubini eRashiya nakumazwe aphesheya. Oku nebhongo abasebenzi bayo kakhulu-abaneziqinisekiso zokufundisa, abaphandi phambili kwaye oogqirha abanamava abamagama edumileyo. Oku okwangoku ekhokelwa nzulu esidumileyo Russian, Academician ye Russian Academy for Sciences Medical, UNjingalwazi Vladimir mna. Petrov.
Ukukhetha le University kuthetha amathuba amaninzi ukuze sizuze nobungcali nokusukelana ngamakhondo.
IYunivesithi elamkelweyo Ubulungiseleli Russian for Education imfundiso omabini abafundi yaseRashiya phesheya.
IDyunivesithi kuluhlu kwi Directory of Higher Medical Schools elivunywe yoMbutho wezeMpilo weHlabathi. Oku kuthetha ukuba abafundi bethu banako ukufumana umsebenzi ngalo naliphi na ilizwe emva kokuphumelela iimviwo zikazwelonke ukuba kuyimfuneko.
Kule mihla kwiYunivesithi izikhundla eliphezulu kakhulu phakathi kwizikolo nokuxilonga Russian Federation. Izazinzulu ezininzi kwiYunivesithi ehlabathi-edumileyo ngenxa ligalelo elikhulu ngethiyori nokusetyenziswa wamayeza. IYunivesithi iye lokuqeqesha abafundi ngamazwe ukususela 1962. abafundi abasuka 113 amazwe awayesakuba yiSoviet Union, iYurophu, Asia, ilatin America, Afrika wafunda kwiYunivesithi wethu. Kweli xesha 3000 amagqirha, abamazinyo kunye paediatricians kunye noosokhemisti baqeqeshiwe kumazwe angaphandle. ukususela 2000 aseVolgograd State University Medical uye wafumana ithuba lokufundisa abafundi abavela kulwimi IsiNgesi.
malunga 70 oogqirha phesheya abandakanyeke kwizifundo zeelwimi kwiYunivesithi qho ngonyaka.
Ukuba ugqiba ukuba bafunde VolSMU, uya kwenza ukhetho olufanelekileyo. Amancedo isigqibo ezinjalo:
uluhlu olubanzi ezinokwenzeka;
ubume abanamava ingqalelo;
sesichengeni banzi ndlela zonyango;
neefizi zokufunda elifanelekileyo kunye namaxabiso yokuhlala yasehostele.
College of izitho;
Uyafuna discuss Volgograd State Medical University ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
EBelgorod State University eBelgorod
Ural Federal University Ngowe
Pavlov First Saint Petersburg State University Medical Saint Petersburg
Kuban State University of Technology eKrasnodar
State University Medical North-Western Saint Petersburg
Moscow State University eMoscow
Russian University New eMoscow